Beesha Caalamka Oo Digniintii Ugu Denbaysay U Dirtay Madaxda Isku-haya Talada Konfurta Sudan. -
Madaxda ku loolamaysa siyaasada Koonfurta Sudan ayaa la gaadhsiiyay digniin kama dambays ah oo uga imanaysa dhinaca beesha caalamka kadib markii todobaadkan horaantiisii uu markale guul-darayteen wada-hadaladii la rabay in lagu soo afjaro colaada 6 sano jirsatay ee dalkaasi halakaysay.
Dalalka Maraykanka, UK, iyo Norway oo digniinaha ugu culus ay ka yimaadeen ayaa u sheegay Madaxwayne Salva Kiir iyo ninka ay is hayaan ee Riek Machar inay ku heshiiyaan tirada maamul-goboleedada federal-ka ah ee uu wadankaasi ka koobnaan doono, oo ahayd caqabad wayn oo ay wada hadaladu la kowsadeen.
“Waxa aan ku booraniyaynaa labada garabka in ay ay heshiis ku dhisan tanaasulaad wada gaadhaan soona afjaraan kala aragti-duwanaashaha maamul-goboleedyada uu ka koobnaanayo dalkaasi, in laga war-wareego tanaasulaad la sameeyo waxa ay wiiqaysaa tubtii wada-hadalada nabada, xabad joojinta, iyo xalinta colaada Sudan, waxana ay taasi dhali doontaa cawaaqib xun” ayaa lagu yidhi war saxaafadeed ay sedexdan dal wadajir u soo saareen maanta.
Madaxwayne Kiir iyo hogaamiyaha Mucaaridka Mr Machar ayaa loo qabtay in inta ka horaysa 22ka February inay ku soo dhisaan dawlad ku meel-gaadh ah.
Horaantii todobaadkan ayaa wada hadal fool ka fool ah oo ay alabaabadu u xidhnaayeen oo ay labadan hogaamiye wada yeesheen ayaa guul-dao ku dhamaaday, markii lagu heshiin waayay tirade gobolada federalka ah ee wadankaas ka koobnaanayo oo ay dawlada iyo Mr. Kiir doonayaan inuu ka koobnaado 32 maamul-goboleed, halka Mucaaridka iyo Mr. Macher ay doonayaan inuu ka kobnaado 10kii gobol ee uu hore uga koobnaa dalkaasi Koonfurta Sudan loo aqoonsado maamul-goboleedyo.
Madaxwayne Kiir ayaa dhankiisa u sheegay xubnaha urur goboleedka IGAD in uu u baahan yahay in uu arintan talo dheeraad ah kala yeesho cida ay khusayso, isla markaaana uu jawaab keeni doono 15 February.